Xisbiga WADDANI Oo Munaasibad Balaadhan Ugu Dabaal-degay Wanqashooda | Somaliland.Org
Xisbiga WADDANI Oo Munaasibad Balaadhan Ugu Dabaal-degay Wanqashooda
January 3, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org)-Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani ayaa maanta xaflad si weyn loo soo agaasimay ugu dabaal dagay guushiisa uu ugu gudbay xisbinimada.
Munaasibad oo ahayd mid ay ka dhex muuqdeen masuuliyiin badan oo ka tirsan xisbiga Waddani iyo masuuliyiin kale oo tiro badan ayaa lagu qabtay Hutel Maansoor ee Magaalada Hargeysa.
Masuuliyiinta tiro badan oo madashaasi ka hadashay ayaa xisbiga Waddani ugu hambalyeeyey guusha xisbinimo ee uu gaadhay iyo dedaalkii uu sameeyey intii uu u soo tartamayey heerka uu maanta taagan yahay.
Ugu horeyn Sheekh Maxamed Cali Geedi oo Munaasibadani ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax laga bedelo nidaamka doorashooyinka loo qabto oo doorashooyinka faraha badan ee dalka laga qabto la mataaneeyo.
Sh. Maxamed Cali Geedi ayaa khudbadiisan ku soo qaaday qodobo kala duwan oo ku sabsan xaalda wadanku marayo waxaanu yidhi isaga oo arrimahaasi ka hadlaya “Waxaynu is waydiinaynaa maku socoon karnaa sidii imika loo galay doorashadii waad arkayseen oo waxaynu nahay dad Muslim ah oo nabad-galyadu waa qaali waana waxaynu ku faanayno haddii aynu nahay Ummadda Somaliland, Waxaynu doonaynaa in Ictiraaf ka helno beesha Caalamka, wali wax badan ayaa dhiman, waxaanan ku talin lahaa in la mideeyo doorashooyinkan badan ee waanka laga qabto.”Ayuu yidhi Cali Geedi.
Xasan Xuseen Maxamed Codyare Guddoomiyaha guddiga qaban qaabada Xaflada oo isna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyey marti sharafta kala soo qayb gashay xaflaadan, waxaanu yidhi isaga oo arrimahaasi ka hadlaya “Waxaan salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan ee aynu ugu dabaal dahayno Xisbiga, waxa la mid ah iyadana Gobalada dalka oo looga dabaal dagaayo guusha uu gaadhay Xisbiga Waddani, Xisbigan Waddani waa Xisbi mucaarad ah waana ka ugu xooga badan, marka labaad waxaan salaam u dirayaa Guddigii qaban qaabada ee gobalada iyo Caasimada.”
Xoghaya Guud Ee Xisbiga Waddani Maxamed Cabdillaahi Uurcade “Xisbiga Waddani waxa uu u dabaal dagayaa guushii waynayd ee uu ka soo hooyay doorashada, waxaanu noqonayaa Xisbiga mucaaradka ah ee labaad ee Dalka, Waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanadii uga qayb-galay Golaha deegaanka intii soo baxday iyo intii hadhay, Waxaan leeyahay tageerayaasha Xisbiga Waddani ee gude iyo dibadba waxaanu ugu mahadnaqaynaa sida way nee ay u tagereen Xisbiga Waddani, dadkii ku dhintay mudaharaadka waanu uga tacsiyadaynaynaa intii ku dhaawacan tayna waxaan ILLAHAY uga baryaynaa inuu shaafiyo”.
C/laahi Uurcade xoghayaha xisbiga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi “Waxa shirwaynihii Ururka lagu qabtay Magalaada Hargeysa Waxaana ka soo qayb-galay dhamaan tageerayaasha Xisbiga Waddani ee Gobalada iyo dalka oo dhan. Waxaanu ahaa Ururkii ugu horeeyay ee is diwaan galiyey. Waxaanu doorashada ka galay kaalimaha koobaad Gobalada Dalka. Waxa uu 120% ka helay Gobalada dalka oo dhan. Degmooyimka dhamaan doorashooyinku ay ka qabsoomeen oo ahaa 19 Degmo, waxa uu ka gaadhay Xisbiga Waddani guulo, waxaan leeyahay Xisbiyada ka qaylinaaya labada mansab ee Guddoomiyaha Xisbiga Waddani, Dhamaantayo Xisbiga Waddani waxa uu hiigsanayaa inuu talada dalka qabto.”
Guddoomiyaha garabka dhalinyarada ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaanu yidhi. “Waxaan Hambalyo u dirayaa dhamaan dhalinyaradii ka soo qayb-qaadatay halgankii Xisbiga Waddani ee wakhtigii doorashada uu kujiray, waxaan dardaaran u soo jeedinayaa dhalinyaradii guusha soo gaadhsiisay Xisbiga Waddani inuu xisbi Qaran u gudbo Waddani, dhamaan dadka Somaliland waxaan xasuusinayaa inuu Xisbiga Waddani yahay kii cadaalada iyo sinaanta ku hogaamin lahaa dalka Somaliland. “
Xidlhibaan Faadumo Cali Madar oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga Waddani oo iyana halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay tidhi “Waxaan leeyahay shacabka Somaliland waad noo hiiliseen, waxaana rajeenayaa inaad marka labaadna aad si wacan noogu codayn doontaan. Nabad-galyada aynu ilaashano cidwalba masuul ayaa ka saran nabad-galyada. Dadka ugu badan ee deeqda bixiyay waxay ahaayeen dumar, isla markaana iyaga ayaa inta badan codka bixiyay haddana waxay heleen 10 xildhibaan, iyada oo lix ay ka soo baxeen Ururadii hadhay. Waxaan dhamaan asxaabta kula dardaarmayaa inaad wada-shaqaysaan. Waxaana dhamaan Salaan idiinka sidnaa Dadka qurba-jooga.”
Guddoomiye ku xigeenkii Ururkii Umadda C/rashiid Maxamed Cali “Marka u horeysa waxaan hambalyeynayaa aniga oo ku hadla afka Umadda, xisbiga Waddani ee xisbinimada u soo baxay, Maanta ka hadli mayno wixii lagu soo gudbaye Somalidu waxa ay tidhaahdaa gar dabadeed gur gurac, waxaanan xisbiga ugu hamblayeynaa.
Mar labaadka waxaan la ilaabayn oo aanu ugu mahadnaqaynaa inuu yahay xisbiga Waddani yahay xisbigii u horeeyey ee noo yimid ee noo tacsiyeeyey noona sheegay inay xad gudubkii meel wanaagsan iska taagan, haddi wadani noo bilaabay garawshiyahaasi dhacay.
Woxoogaa dhawr qof oo halkan soo kacay oo mucaaradadii aanu ka sugaynay ku dhawaajiyey nin ayaa yidhi waar khiyaamada ma ku baraa markaasu yidhi horta hashaada ii lis markaasu u lisay oo uu yidhi waataan hashaada.
Guddoomiye ku xigenka Rays Aadan Cilmi Dhoolayare oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyey guusha xisbiga Waddani waxaanu yidhi isaga oo arrimahaasi ka hadlaya “Waxaan halkan ka hambalyeynaa ururadii soo baxay, kolay marka tartan dhaco cid uunbaa ku guulaysata, waxaanu Uga Tanaasualay Danta Qaranka, anaga oo ah Ururka Ryas oo aan ku hadlaayo afka ururka, waxaan xisbiga Waddani leeyahay hambalyo”.
Suldaan Axmed Daahir oo ka mid ah Salaadiinta Somaliland ayaa isna madashaasi ka hadlay, waxaanu yidhi isaga oo hambalyo u diraya xisbiga Waddani “Anigoo Ku Hadleya Afka Slaadiinta Somaliland Waxaan leeyahay ilaahay Guusha Ha inoogu Sii Wado. Haddii mar aynu qaadanay dimquraadiyadii oo aynu ka tagnay Kitaabkii, waxaynu gaadhi la nahay dimquraadiyadiina. Waxaana dalkeena haysta mushkilad, mushkiladaasina waa qaadka. Waxaan leeyahay In Madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay waxaanu uu balan qaaday inuu furaayo Ururda wuuna furay. Ninkii Suldaanka ahaa waa lagu soo dhex dhacay waxaana ku soo dhex dhacay dadkisii oo kala raacay ururada. Doorashooyinka ha lamideeyo oo dhaqaalaha ayaa inaga burburaaya oo dhaqankii ayaa xumaaday. Qabyaalada ha la aaso, waxaanu leenahay doorashooyinkii immika cashar aynu ku qaadan doorashadan Golaha Degaanka ee Immika. Aniga qaar ayaa igu yidhaahda Suldaankaasi waxa uu ka soo jeeda Urur hebel. ”
Previous PostGuddoomiyaha WADDANI oo Khudbad Dheer Oo Taariikhiya ka Jeediyay Wanqasha XisbigoodaNext Post“Faysalow haddii aad xaaraan ku soo baxday tartanka ka hadh oo u banee xisbiyada kale”	Blog